နင့်ကို ငါပြောတယ် “ငါ ဒီနေ့လှေကားပေါ် တံမြက်စည်းလှဲတာ.. ပြုတ်ကျခါနီးလေးပဲ”
“အိုး.. သတိထားမှပေါ့ မိန်းမရယ်” လို့ နင့်ဆီကနှစ်သိမ့်တာကို ငါမျှော်လင့်ခဲ့ပေမယ့်
“နင် ဖြေးဖြေးမလှဲတတ်ဘူးလား” ဆိုတဲ့အဖြေကိုပဲ ငါရခဲ့တယ်။ ငါဝမ်းနည်းမိတယ်၊ နင် ငါ့ကိုမချစ်ဘူး။ ဂရုမစိုက်ဘူး။
နင့်ကို ငါပြောတယ် “လမ်းမှာကားပျက်သွားလို့ ကားမှတ်တိုင်ရောက်ဖို့ နာရီဝက်ကြာ ငါလမ်းလျှောက်လိုက်ရတယ်”
“တက္ကစီစီးပြီး ပြန်ခဲ့ရော့ပေါ့.. ပင်ပန်းနေပြီလား” ဆိုတဲ့ ဂရုစိုက်သံကို နင့်ဆီက ကြားချင်ခဲ့ပေမယ့်
“သိပ်မှမဝေးတာ.. လျှောက်ပေါ့။ ဝိတ်လျှော့တာနဲ့ တူတူပဲ” လို့ နင်ပြောခဲ့တယ်။ နင့်ငါ့ကို မချစ်ဘူး၊ ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုပြီး ငါစိတ်တိုမိခဲ့တယ်။
နင့်ကို ငါပြောတယ် “ဟင်းကြော်တာ နည်းနည်းတူးသွားတယ်၊ နင်သည်းခံပြီး စားပေးနော်”
“အင်း.. ကိစ္စမရှိဘူး။ နင်ဘယ်လိုချက်ချက် ငါကြိုက်တယ်” ဆိုတဲ့ ကြင်နာသံကို နင့်ဆီက ကြားချင်ခဲ့ပေမယ့်
“ကြည့်ရုံနဲ့ မစားချင်တော့ဘူး.. စားချင်စိတ်လဲ မရှိတော့ဘူး” လို့ နင်ပြောခဲ့တယ်။ နင့်ငါ့ကို နားမလည်ဘူး၊ ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုပြီး ငါဝမ်းနည်းခဲ့မိတယ်။
နင့်ကို ငါပြောတယ် “ငါ့ဆံပင်တွေ ကျွတ်လိုက်တာ.. ဆရာကတော့ စိတ်မပူနဲ့လို့ ပြောတာပဲ။ ဂတုံးဖြစ်သွားမှာတောင် စိုးတယ်”
“စိတ်မပူပါနဲ့.. နင့်ဆံပင်တွေများနေတာပဲ။ ဂတုံးဖြစ်လောက်တဲ့အထိ မကျွတ်နိုင်ဘူး” ဆိုတဲ့ အားပေးသံကို နင့်ဆီက ကြားချင်ခဲ့ပေမယ့်
“ကိုယ့်ဆံပင်ကျွတ်တာကို ခုမှသိတာလား၊ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ နင့်ဆံပင်မွေးတွေချည်းပဲ၊ ညစ်ပတ်တယ်” လို့ နင်ပြောခဲ့တယ်။ နင် ကိုယ်ချင်းမစာဘူး၊ ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုပြီး ငါဝမ်းနည်းခဲ့မိတယ်။
နင့်ကို ငါပြောတယ် “သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ချိန်းထားလို့ ဒီညအိမ်ပြန်နောက်ကျမယ်နော်”
“ဘယ်သူတွေပါလဲ? သတိထားနော်.. စောစောမပြန်နိုင်ရင် ဖုန်းမကြာမကြာဆက်ခဲ့နော်” ဆိုတဲ့ ဂရုစိုက်သံကို နင့်ဆီက ကြားချင်ခဲ့ပေမယ့်
“နင့်သဘောပဲ.. စိတ်ချမ်းသာသလိုလုပ်” လို့ နင်ပြောခဲ့တယ်။ နင်ငါ့ကို မချစ်ဘူး၊ ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုပြီး ငါဝမ်းနည်းခဲ့မိတယ်။
နင့်ကို ငါပြောတယ် “ငါ ဟိုဒင်းဖြစ်နေလို့ ဗိုက်အရမ်းအောင့်တယ်”
“သည်းခံလိုက်ပါ၊ တစ်ရက်၊ နှစ်ရက်ဆို ပြီးသွားမှာပါ” ဆိုတဲ့ ဂရုစိုက်သံကို နင့်ဆီက ကြားချင်ခဲ့ပေမယ့်
“မိန်းမတွေ သိပ်အလုပ်ရှုပ်တာပဲ” လို့ နင်ပြောခဲ့တယ်။ နင်ငါ့ကို မချစ်ဘူး၊ ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုပြီး ငါဝမ်းနည်းခဲ့မိတယ်။
နင့်ကို ငါပြောတယ် “ဒါနင့်အတွက် ငါရွေးဝယ်ထားတဲ့ အနွေးထည်၊ နွေရာသီမှာ လျှော့ဈေးနဲ့ရောင်းလို့ ဝယ်ခဲ့တာ၊ ခုဆောင်းရောက်ပြီဆိုတော့ ဝတ်လိုက်ပါနော်၊ နင့်အတွက် ငါရဲ့ဆောင်းရာသီ လက်ဆောင်ပေါ့”
“ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ နင့်အချစ်ကြောင့် ဒီဆောင်းမှာ ငါပိုနွေးထွေးတော့မယ်” ဆိုတဲ့ ဂရုစိုက်သံကို နင့်ဆီက ကြားချင်ခဲ့ပေမယ့်
“ရာသီပြောင်းလျှော့ဈေးမှာ ဝယ်ခဲ့တဲ့ အပေါစားပဲ” လို့ နင်ပြောခဲ့တယ်။ နင်ငါ့ကို မချစ်ဘူး၊ ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုပြီး ငါဝမ်းနည်းခဲ့မိတယ်။
နောက်တော့ ဆောင်းကုန်လို့ နွေရောက်တဲ့အထိ အဲဒီအင်္ကျီကို နင်မချွတ်ခဲ့ဘူး။ ရုံးတက်၊ ရုံးဆင်း နေ့တိုင်းနင်ဝတ်ခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ နင့်ငါ့ကို ဂရုစိုက်တယ်၊ ချစ်တယ်၊ ဒါက တစ်ခြားလူတွေနဲ့မတူတဲ့ နင်ရဲ့ချစ်နည်းပေါ့။
နင့်ကို ငါပြောတယ် “ဒီနေ့ နားထောင်ခဲ့တဲ့ ဓမ္မတေးက အရမ်းကောင်းတာပဲ၊ နားထောင်ရင်း ခံစားရတယ်”
“ဘယ်စာအုပ်၊ ဘယ်အခွေထဲကလဲ၊ ငါတို့သွားရှာဝယ်ရအောင်လေ”ဆိုတဲ့ ဂရုစိုက်သံကို နင့်ဆီက ကြားချင်ခဲ့ပေမယ့်
“ဘယ်တေးဖြစ်ဖြစ် အတူတူပဲ” လို့ နင်ပြောခဲ့တယ်။ နင်ငါ့ကို မချစ်ဘူး၊ ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုပြီး ငါစိတ်တိုခဲ့မိတယ်။
နင့်ကို ငါပြောတယ် “လမ်းထိပ်က ခေါက်ဆွဲသုပ်က အရမ်းစားလို့ကောင်းတယ်”
“ဟုတ်လား.. မနက်ဖြန်ကျရင် ငါတို့အတူတူသွားစားမယ်လေ” ဆိုတဲ့ ဂရုစိုက်သံကို နင့်ဆီက ကြားချင်ခဲ့ပေမယ့်
“တစ်ချိန်လုံး စားဖို့ချည်းတွေးနေတယ်၊ နင့်ကိုယ်လုံးကို နင်ပြန်အားနာအုန်း” လို့ နင်ပြောခဲ့တယ်။ နင်ငါ့ကို မချစ်ဘူး၊ ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုပြီး ငါစိတ်တိုခဲ့မိတယ်။
နင့်ကို ငါပြောတယ် “နင်နဲ့ရခဲ့လို့ ငါဝမ်းသာတယ်။ နင်ဟာ ငါရဲ့ ခင်ပွန်းကောင်းတစ်ဦးပါ”
“အင်း.. ငါလည်း ဝမ်းသာတယ်။ နင်က ငါရဲ့ဇနီးကောင်းတစ်ဦးပါ” ဆိုတဲ့ ဂရုစိုက်သံကို နင့်ဆီက ကြားချင်ခဲ့ပေမယ့်
“ယူတောင်ယူပြီးပြီပဲ မကောင်းတော့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ” လို့ နင်ပြောခဲ့တယ်။ နင်ငါ့ကို မချစ်ဘူး၊ ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုပြီး ငါစိတ်တိုခဲ့မိတယ်။
နောက်ဆုံး ငါသဘောပေါက် နားလည်ခဲ့ပါတယ်၊ အေးတိအေးစက် ဂရုမစိုက်တတ်တဲ့ နင့်ခန္ဓာအောက်မှာ စကားလုံးတွေနဲ့ မဖော်ပြတတ်တဲ့ နွေးထွေးတဲ့၊ ငါ့အတွက်အချစ်တွေပြည့်နေတဲ့ အသဲနှလုံးတစ်စုံ ရှိတယ်ဆိုတာကို ငါနားလည်ခဲ့တယ်။ ငါ့ကိုနင်ချစ်တယ် ဒါပေမယ့် နင်ဖွင့်မပြောတတ်ခဲ့ဘူး၊ ဒါကလည်း လူများနဲ့မတူတဲ့ ငါ့ကိုချစ်တဲ့ နင်ရဲ့ချစ်နည်းတစ်မျိုးပေါ့နော်…
စာရေးဆရာမ နိုင်းနိုင်းစနေ ရေးသားထားခြင်းကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Posted by saw ehlor at 17:55
Recover method of folder hidden file
PC- Mechanic (Diagnostic of PC using by order trac...
ကွန်ပျူ တာ keyboardတစ်ခုလုံးရဲ့အသုံးဝင်ပုံလေး
Local area connetion မပေါ်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
Karaoke Subtitle (VCD Karaoke စာတန်းထိုးနည်း) ပြုလ...
Myanmar Calendar on Blogspot
Window7 update ပေးရင် သတိထား
Living Together And Social Problems
သိထားသင့်တဲ့ ကွန်ပျူ တာဆိုင်ရာ အခြေခံအချက်အလက်များ
ကွန်ပျူ တာတွင်ရှိသင့်သည့် WinRAR ဆော့ဝဲ 32 bit /...
ဟိန်းဝေယံ အဖေနှင့် ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း ဖုန်းပြောကြ...
Facebook အပါအဝင် ပုံများကို Zoom ဖြင့် ကြည့်ရအောင်
Avast AntiVirus 5.0.5 + Serial Key
Avast! Pro Antivirus6+ License Key Expiry Date 2038
win rar ဖြင့် ဖိုင်ဖြေနည်း
Recycler virus ကို ဘယ်လို သတ်မလဲ
ယင်ကောင်များကို လေထဲ၌ လမ်းလျှောက်နိုင်အောင် ဖန်တီး...
ကွန်ပျူတာပညာလေ့လာ လိုသူများအတွက် မြန်မာစာအုပ်တွေရှ...
Repairing Memory Stick
Memory Stick မှာမကြာခဏတွေ့ တတ်သော Virus များရှင်းနည်း
Hacking ကာကွယ်နည်း (1)
Gmail သုံးသူ အားလုံး သို့ အသိပေးစာ ( အားလုံး ဖတ်ပါ...
ကျွန်တော်တို့နဲ့ စကားဝှက် (၁)
Web စာမျက်နှာများအား PDF အဖြစ်ဖန်တီးခြင်း
USB ကွန်ပျူ တာကမသိလျှင်
အခိုးခံရသော Gmail အားပြန်လည်ရယူခြင်း - zerone(ေ...
Gtalk သုံးပြီးလုပ်ဆောင်သင့်တဲ့အချက်များ - itcrazy
Fb အကောင့်ကို Hack တာဖြစ်နိုင်ရဲ့လား - သန့်ဇင်ဌေး
ကွန်ပျူ တာ Hangs ရခြင်း (၁၀)ချက် - ညီညီထွန်း
Facebook ၏ အသစ်
Co.cc နဲ့ Blogger
ကွန်ပျူ တာ Desktop ကို Lock ချကြမယ်
သင်္ဘောအရွက် နှင့် ကင်ဆာဆဲအမျိုးမျိုး
တစ်မိုးအောက်မှာ တစ်ယောက်ထဲချစ်တယ်ဆိုမှနော် (ရည်းစာ...
ဓာတ်ပုံလေးတွေကို Zoom ဆွဲကြည့်ရအောင်
အပြာရောင်ဖြစ်သွားတဲ့ မိမိကွန်ပျူ တာ folder text တေ...
Gtalk မှာတင်ဖို့ စာသား အလန်းလေးများ
USB မှ autorun.inf ကို ဘယ်လို ရှင်းမလဲ
Free USB Disk Security 1.0
Uninstall ပြုလုပ်မရသည့် Problem
Remove Write Protection On USB Drive or Memory Card
Internet Download Manager (Silent install/activated)
Nero_Burning_ROM_v11 + Serial
Android မှာ Gmail Account အဆင့်ဆင့် ထည့်သွင်းနည်း
Blog မှာ Copy မရတာကို ရအောင်လုပ်မယ်။
Flash Drive မှ Virus ကိုကာကွယ်နည်းနှင့် Autorun Vi...
ကြောက်စရာကောင်းသော Virus . ပါဝင်သော အင်တာနက် သီချင...
USB Memory Stick ထဲကဖိုင်တွေကို ဖျက်မရ..ကော်ပီလုပ်...
Virus မဟုတ်သော Windows ဖျက်စီးရေးပရိုဂရမ်များ
Control Function သုံးပြီး ဆော့ဖ်ဝဲတွေကို ကာကွယ်ထား...
ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများ မလွဲမသွေ ပြုလုပ်သင့်သော အခ...
HTML Cell Merge, Appearance, Frame အကြောင်း